၁။ Personality ဆိုတာ ဘာလဲ
Latin စကားလုံး ‘Persona’ ကနေ လာပါတယ်။ ပြဇာတ်တွေမှာ သရုပ်ဆောင်တွေ ကိုယ့်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ဝတ်ဆင်ရတဲ့ မျက်နှာဖုံး လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောရရင်တော့ ကိုယ်ဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ ခံစားချက်ပိုင်းနဲ့ တုံ့ပြန်မှုပိုင်း အားလုံးကို Personality လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူက စိတ်ဆတ်တယ်၊ သူက အေးဆေးတယ်၊ သူက စမတ်ကျတယ်၊ ဒါမျိုးတွေကို ခေါ်တာပေါ့။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလို့ ဘာသာပြန်ရမယ်ထင်တယ်။
၂။ Personality အရေးကြီးလား
အမေရိကန် စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို အကဲဖြတ်တဲ့နေရာမှာ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် (Verbal factor) က ၇ %၊ လေယူလေသိမ်း၊ အသံအနိမ့်အမြင့် စတဲ့ Vocal factors တွေက ၃၈ % နဲ့ လူရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနေအထား (Physical factor) က ၅၅ % ထိ အရေးပါပါသတဲ့။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ဟုတ်ပါ့မလားပေါ့။ ဒါပေမယ့် တွေးကြည့်ပါ၊ လူတစ်ယောက်ကို မကြည့်ဘဲ၊ သူ့အသံနေ အသံထား၊ လေယူလေသိမ်းတွေ မပါဘဲ ပြောတဲ့အချက်အလက်ချည်း နားထောင်ကြည့်။ ဘယ်လိုမှ လူတစ်ယောက်ကို အကဲဖြတ်လို့ မရပါဘူး။
အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းရွေးတယ်ဆိုပါစို့။ ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် စောလား၊ နောက်ကျလား၊ ဒီလူ အခန်းထဲ ဘယ်လိုဝင်လာသလဲ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ ဘယ်လိုရှိသလဲ၊ မျက်နှာအမူအရာက လေးစားမှု ရှိသလား၊ တံခါးကို ဂျိန်းခနဲပိတ်လိုက်သလား၊ ပစ္စည်းတွေ ဝုန်းဆို ပစ်တင်လိုက်သလား၊ သူ ဘာအသုံးအဆောင်တွေ သုံးသလဲ၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ Physical factor တွေပါပဲ။ ဒါတွေကို အဓိကထားပြီးပဲ လူတစ်ယောက်ကို အကဲဖြတ်ကြတာပါ။ အင်တာဗျူးဖြေတုန်းမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် Personality ဟာ လူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး လူတွေကြားထဲမှာ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Personality တက်စေတဲ့ အခြေခံအချက် ၆ ချက်
၁) အသက်ပါပါစေ၊ စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိပါစေ (Be lively and enthusiastic)
ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာ Dialogue ကို အဖြစ်သဘောလောက် ပြောပြီး အသက်မပါစွာ သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေ မြင်ရတဲ့အခါ စိတ်ထဲ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။ အားမလိုအားမရ ဖြစ်တာပေါ့။ တကယ်ကို ပရိသတ်အားပေးတဲ့၊ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် တကယ်အပြင်မှာ ဖြစ်နေသလိုကို ဇာတ်ကားထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ထားကြတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အပြင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ စိတ်မပါ လက်မပါ လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ ဘယ် Customer မှ သဘောမကျပါဘူး။ စင်ပေါ်မှာ ဟောပြောနေမယ်၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်း တင်ပြနေမယ်၊ လူနာဆီ ရောဂါအကြောင်း သွားရှင်းပြရမယ်၊ အဲဒီအခါတိုင်းမှာ တက်ကြွသွက်လက်စွာ၊ စိတ်အားထက်သန်စွာ လုပ်နေ၊ ပြောနေမယ်ဆိုရင် အလုပ်မှာ အောင်မြင်နိုင်တာပေါ့။
၂) သပ်ရပ်စွာ ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ (Be properly attired)
ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လူကို ယုံကြည်မှုပေးပါတယ်။ အဝတ်အစား ခပ်နွမ်းနွမ်း ဝတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် ဝတ်ထားတဲ့အချိန် စိတ်ခံစားချက်ချင်း မတူပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုချင်းလည်း ကွာပါတယ်။ လူတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ ဝတ်စားဆင်ယင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အလုပ်ခွင်မှာတော့ စောင့်ထိန်းရမယ့် ကျင့်ဝတ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ လူနာဆောင်ထဲကို ဆရာဝန်က တီရှပ်နဲ့ သွားမယ်ဆို အဆင်မပြေသလို၊ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်တက်ဖို့ ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ပြောစရာ ရှိတာပေါ့၊ ဖေ့စ်ဘွတ်က မာ့ခ်ဇူကာဘာ့၊ စတိဗ်ဂျော့ဘ်စ်၊ သူတို့တွေဆိုရင်ရော၊ တီရှပ်တွေပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝတ်ဆင်တတ်ကြတယ် မဟုတ်လား၊ ဒီလို မေးစရာရှိတယ်။ ပြန်ဖြေရရင်တော့ သူတို့လို လုပ်ချင်ရင် သူတို့လို ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပါဦး။ သူတို့တွေက သူတို့ရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ Personality ကို အဝတ်အစားက ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ထက် အများကြီးမြင့်သွားပါပြီ။ ဘယ်လိုပဲ ဝတ်စား ဆင်ယင်လာပါစေ၊ လူတိုင်းက လေးစားပြီးသားပါ။ အဲဒီအဆင့်ကို ကိုယ်မရောက်သေးဘဲ၊ တခြား အတုယူစရာတွေ အရင်မယူသေးဘဲ အဝတ်အစားကို အရင် အတုမယူစေချင်ပါဘူး။
၃) ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ် မျက်နှာအမူအရာ (Wearapleasant outlook)
တရုတ်စကားပုံ ရှိပါတယ်။ မပြုံးတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘာဆိုင်မှ မဖွင့်သင့်ဘူး တဲ့။ အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲ ဝင်သွားတဲ့အခါ လှလှပပလေး Decoration လုပ်ထားမယ်၊ ပစ္စည်းတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထားထားမယ်ဆို ဘယ်လိုခံစားရလဲ၊ ကြည်နူးတာပေါ့။ တွေးကြည့်ရင် အဲဒါက အဆောက်အဦက ကိုယ့်ကို ပြုံးပြလိုက်တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ မျက်နှာတွေဟာလည်း အဲဒီလို မြင်ရသူတိုင်း ကြည်နူးသွားရတာမျိုး ဖြစ်နေရင် ကောင်းပါမယ်။ သုန်သုန်မှုန်မှုန်နဲ့ဆို ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ။ ပြုံးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးပေးပါသတဲ့။ မျက်မှောင်ကြုတ်ဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့ ကြွက်သားအရေအတွက်ထက် ပြုံးဖို့ အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့ ကြွက်သားအရေအတွက်က ပိုနည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်များ မျက်မှောင်ကြီးကြုတ်ပြီး အပင်ပန်းခံမလဲ။ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်သာ နေလိုက်ပါ။
၄) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိပါစေ (Self-confident)
ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တယ်၊ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတယ်၊ တစ်ခွန်းပြောလိုက် စဉ်းစားလိုက်၊ ပြောပြီးမှ မဟုတ်ဘူး ပြန်ပြင်လိုက် လုပ်နေရင် ဘယ်လိုမှ လူနာရဲ့ယုံကြည်မှုကို မရနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ဆိုတာ ဘယ်ကရသလဲဆိုရင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကနေ ရပါတယ်။ စင်ပေါ်တက် စကားပြောရတော့မယ်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆို လူတိုင်း ဒူးတုန်မှာပဲ။ ဒုတိယအကြိမ် ပိုအဆင်ပြေလာတယ်၊ တတိယအကြိမ် ပိုရဲလာတယ်၊ နောက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိလာတော့တာပဲ။ ဒါကြောင့် Personality တက်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု ရှိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၅) မျက်လုံးချင်း ဆုံကြည့်ပါ (Look into the eyes)
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်ပြောတာ တစ်ယောက် ကောင်းကောင်း နားလည်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အချည်းနှီးပါပဲ။ အဲဒီလို ဆက်သွယ် ပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာ မျက်လုံးချင်းဆုံဖို့ Eye contact က အရေးကြီးလာပါတယ်။ တောထဲမှာ သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဆုံခဲ့လို့ ကြောက်အားလန့်အား ထွက်ပြေးရင် သေချာတယ်၊ အကိုက်ခံရတော့မှာပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ သူတို့တွေရဲ့ မျက်လုံးကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ရင် အဲဒီအကောင်တွေ ဘာမှ ရန်မမူတော့ဘဲ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ် တဲ့။ စူးရှတဲ့ အကြည့်တစ်ခုဟာ ရန်မူမယ်၊ တိုက်ခိုက်မယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဆောင်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ ကိုယ်ဟာ ဒီအခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ သတ္တိရှိတယ် ဆိုတာကို တစ်ဖက်ကို သိအောင် ပြလိုက်တာပါပဲ။
၆) တည်ငြိမ်မှု ရှိပါစေ (Remain calm)
အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းစဉ်က မဟတ္တမဂန္ဒီကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှ အရာရှိတစ်ယောက်ဟာ ဂန္ဒီကြီးကို တကယ် တွေ့တဲ့အခါလည်းကျရော၊ ဘယ်လိုမှ မရိုက်နှက်ရဲတော့ပါဘူး တဲ့။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေမှာတောင် တည်ငြိမ်မှု မပျက်တဲ့ ဂန္ဒီကြီးကို တွေ့လိုက်ရလို့ပါပဲ တဲ့။ လူတွေဟာ ပုံမှန်ဆို မသိသာဘူး၊ အတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါ၊ အဝေဖန်ခံရတဲ့အခါ၊ အပြောင်းအလဲနဲ့ ကြုံတဲ့အခါကျ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားသွားပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား တုံ့ပြန်မှုတွေ လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာမဆို တည်ငြိမ်မှုရှိအောင် ကြိုးစားကြဖို့ လိုပါတယ်။
ခုပြောခဲ့တဲ့ အချက် ၆ ချက်ဟာ Personality နဲ့ပတ်သက်ရင် တကယ့်အခြေခံအချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်တစား လေ့လာသင့်တဲ့ ခေါင်းစဉ်လည်း ဖြစ်သလို၊ အလွယ်တကူလည်း အွန်လိုင်းမှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ ဖတ်ရုံ သိရုံသက်သက်ဆိုတာထက် ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပါမှ ကိုယ့်ကို အောင်မြင်မှုရစေမယ့် အရာတွေလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref : Personality by Venkata Iyer
Nyopyar January 8, 2022 at 7:06 AM
The PDF's heart, the PDF's spirit,
the PDF's soul are everything.
We salute to our heroes.
Sofi February 26, 2022 at 10:21 PM
Perfect day = can click all days🏜️
ThourA March 10, 2022 at 11:07 PM